နေအိမ် » တိုက်ပွဲတွေ » Skeleton King In Ghost Land
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Skeleton King In Ghost Land
ဖေါ်ပြချက်: အရိုးစုဘုရင်, ဝိညာဉ်တော်မြေယာအတွက်စွန့်စားမှုရှိတယ်, သူ့ကိုသူ၏ဓားကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အားလုံးတစ္ဆေကိုတိုက်ကိုကူညီပေးပါတယ်။
ကစား: 25,063 tag ကို: Skeleton King, တစ္ဆေဂိမ်း, ghost, Skeleton
ဆရာဝန်ကမှာ scooby Doo
နတ်ဆိုးနှင့်မိကျောင်းကနေ run နေ, Scooby Doo ကိုကျောက်ကျော် tripped မိမိနှင့်ဦးဒဏ်ရာရ, ဒါ Shaggy သင့်ရဲ့အကူအညီနဲ့၏ search အတွက်ဆေးရုံထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ , သင့်ခေတ်မီဆေးပညာ tools တွေကိုသုံးပါထင်း chip ကိုဖယ်ရှားတဲ့ patch ကို ထား. , t ကိုအပေါ်ရေအေးထည့်သွင်း
scooby Doo တစ္ဆေအနမ်း
Scooby Doo နှင့် Shaggy ဤမျှလောက်များစွာသောသရဲတစ္ဆေရှိပါတယ်ရှိရာသင်္ချိုင်းထဲမှာပျောက်ဆုံးလျက်ရှိကြောင်း Scoobydoo နှင့် Shaggy ကိတ်အားဖြင့်သင်္ချိုင်းမှလွတ်မြောက်ရန်ကူညီပေးရန်ပါ။ လမျးပျေါမှာအများအပြားအတားအဆီးရှိပါတယ်ဖြစ်သောကြောင့်သတိထားပါ။
တစ္ဆေမြို့ omniverse ben 10
အဟယ်လိုညတွင်ဘင် 10 ရန်ပွဲကိုတစ္ဆေဖရုံသီးသို့လှည့်။ ဘင် 10 မြို့ကယ်တင်ရန်အားလုံးသရဲတစ္ဆေကိုသတ်ကိုကူညီပါ။
ဟိုတယ် Transylvania ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကျမ်းပိုဒ်နည်းလမ်းများမှတဆင့်သွားလာလည်ပင်းမှာနာကျင်မှုဖြစ်နိုငျသညျ! Dracula ဒီလျှောဝင်္ဂိမ်းထဲမှာသူ့ကိုလမ်းပြသင်တို့အပေါ်မှာရေတွက်နိုင်ပါသလား?
10 ကွဲပြားခြားနားသောဖုတ်ကောင်ဦးခေါင်း,2ဂိမ်း Modes သာ,3တည်နေရာနောက်ခံ။ ဖုတ်ကောင်နေရာတိုင်းဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာသူတို့ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ထားကို ယူ. သငျသညျမွငျနိုငျသမြှသောဖုတ်ကောင်ရဲ့ခေါင်းကိုချလိုက်တယ်။ သငျသညျတစ်ခုတည်းဦးခေါင်းကိုလက်လွတ်လျှင်, သင်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
Georg အဆိုပါဝိညာဉ်တော်အ creepy ရဲတိုက်ထဲမှာပိတ်မိနေပါတယ်။ သင့်ရဲ့မစ်ရှင်ထဲကရဲတိုက်မှမိမိသွားသောလမ်းကိုရှာဖွေတာကသူ့ခရီးစဉျတှငျသူ့ကိုကူညီဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သောကွောငျ့ပြီးနောက်အားလုံးမှန်နှင့်ကင်မရာများသတိပြုပါ - သင်ကတစ္ဆေများမှာ! သောကွောငျ့အားလုံးသင့်ရဲ့မှတ် ယူ. သင်နှင့်အတူကျွမ်းကျင်မှုကိုကလစ်နှိပ်ပါ